Halkuu Solskjaer ka soo galay liiska Tababarayaasha ugu Mushaarka badan Premier League kaddib heshiiskii uu shalay u saxiixay Man united?? – Gool FM
Halkuu Solskjaer ka soo galay liiska Tababarayaasha ugu Mushaarka badan Premier League kaddib heshiiskii uu shalay u saxiixay Man united??
Haaruun March 29, 2019
(Manchester) 29 Maarso 2019. Waxaa la shaaciyey liiska tababareyaasha ugu mushaarka badan horyaalka Premier League kaddib heshiiskii uu shalay kooxda Manchester United u saxiixay macallin Solskjaer.
Manchester United ayaa shalay ku meel gaarnimada ka saartay tababare Solskjaer, iyadoona xilka si joogto ah ugu aamintay macallinka reer Norway, kooxda ka arrmisa garoonka Old Trafford ayaana heshiis saddex sano ah la gaartay Solskjaer kaa oo xilka ka dhaxlayJose Mourinho 19 bishii December ee sanadkii hore.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa laga adkaan waayay 10 kulan uu Premier League ku hoggaamiyay Red Devils, iyadoo uu hal kulan oo qura barbaro galay, taa oo keentay in xilka si rasmi ah loogu dhiibo.
Waxaa la isweydiinayaa halkee Ole Gunnar Solskjaer ka soo galay liiska tababareyaasha ugu mushaarka badan horyaalka Premier League kaddib markii xilka Man United si joogto ah loogu dhiibay shalay?.
Jose Mourinho oo laga cayriyey bishii December shaqada kooxda Manchester United iyo hoggaamiyaha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ah labada macallin ee ugu mushaarka badan horyaalka Premier League waxaana ay jeebka ku shubtaan/shubteen mushaar dhan 15 milyan oo gini sanadkii.
Solskjaer oo 46-sano jir ah ayaa haatan qaadan doona 7 milyan oo gini, waana kala bar mushaarkii uu Man Utd ka qaadan jiray Jose Mourinho oo kooxda laga ceyriyay.
Macallinka Tottenham ee Mauricio Pochhettino ayaa hela mushaar dhan 8.5 milyan oo gini, halka tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp uu jeebka ku shubto adduun lagu qiyaasay 7 milyan oo gini sanadkii ama 134,000 oo gini todobaadkii.
Macallinka Arsenal ee Unai Emery ayaa mushaar ahaan u qaata 6 milyan oo gini halka hoggaamiyaha Chelsea ee Maurizio Sarri oo helo adduun dhan 5.15 milyan oo gini sanadkii.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska Tababarayaasha ugu Mushaarka badan Premier League:-
ARAG: Sida ay u muuqan lahayd kala Sarreynta horyaalka Premier League haddii laga soo bilaabo tan iyo markii uu Solskjaer xilka u qabtay Man United
HORDHAC : Man City VS Fullham ? xogta kulanka iyo xaqiiqooyinkiisa oo dhameestiran